DAAWO-Xog Ku Saabsan Imtixaankii Shahaadiga ah ee Puntland oo La Soo Bandhigay.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa shaacisay xogta imtixaankii shahaadiga ahaa ee Puntland oo maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyey, kadib muddo asbuuc ah oo uu socdey.
Waxaa u fariistay 15,892 arday, waxana ay kala ahaayeen 6,327 gabdhoodh iyo 9,565 wiil, Dugsiyada dhexe;10,887 arday oo ay ku jiraan; 4,439 gabdhoodh, dugsiyada sare; 5005 ardayda oo ay ku jiraan;1,888 hablood. -Dhinaca dugsiyada;385 ayaa ka qeybgalay oo kala;297 dugsi hoose dhexe iyo 88 dugsi sare.
Imtixaanka waxaa ku howlanaa hirgelintiisa 794 qof ayaa ilaaliye ka ahaa imtixaanka, waxaana kormeerayey 1302 qof, 260 Boolis ah ayaa waardiyeeyey imtixaannadan, waxaana lagu qaadayey 63 Baabuur iyo doonyo deg deg ah goobaha qaar.
HALKAAN RIIX SI AAD U DAAWATO SHIRKA JARAA’ID
Imtixaanka waxaa lagu galay 106 goobood, 66 waxaa lagu qaaday dugsiyada dhexe halka 44 xarumoodna lagu qaaday dugsyada sare